Tour of California 2015 စာစုများ။ ~ Htet Aung Kyaw
Tour of California 2015 ပထမနေ့ Mark Cavendish အနုိုင်ရ။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ကာလီဖုိုးနီးယားပြည်နယ်မှာ မနေ့ကစတင်တဲ့ Tour of California 2015 စက်ဘီးပြိုင်ပွဲ ပထမနေ့မှာ (Etixx-QuickStep) အသင်း မှ Mark Cavendish က ပထမ ရသွားပါတယ်။
Sacramento- Sacramento ကီလုိုမီတာ ၂၀၄.၃ တာဝေးပွဲမှာ နောက်ဆုံး ပန်းဝင်ခါနီး မီတာ ၅၀ ၀န်းကျင်မှာမှ Sprint နဲ့ အသားကုန်တင်ပြီး အခုလုို အနုိုင်ရသွားတာပါ။ (Tinkoff-Saxo) အသင်းမှ Peter Sagan က ဒုတိယ၊၊ (BMC Racing) အသင်းမှ Jempy Drucker က တတိယ ရရှိခဲ့ပါတယ်။
၈ ရက်ကြာကျင်းပမဲ့ ဒီပွဲဟာ လာမဲ့တနင်္ဂနွေကျရင် Los Angeles - Pasadena မှာ ပန်းဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ည (မြန်မာစံတော်ချိန် အင်္ဂါနေ့ မနက်) မှာတော့ Nevada City မှ Lodi အထိ 193.1 ကီလုိုမီတာကို ဒုတိယ နေ့အဖြစ် ဆက်လက်ယှဉ်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
မနေ့ကပွဲမှာ ၁ မှ ၁၀ အထိ ပန်းဝင်သူ စာရင်းကတော့...
Tour of California 2015 ဒုတိယနေ့မှာလည်း Mark Cavendish ကပဲ နုိုင်။
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၊ ကာလီဖုိုးနီးယားပြည်နယ်မှာ ၈ ရက်ကြာ ကျင်းပနေတဲ့ Tour of California 2015 ဒုတိယနေ့မှာလည်း (Etixx-Quick Step) အသင်းမှ Mark Cavendish ကပဲ ဆက်လက်အနုိုင်ရသွားပါ တယ်။ မနေ့ကအတုိုင်း ပန်းဝင်ခါနီး မီတာ ၅၀ အလုိုမှာမှ Sprint ဆွဲကြပြီး (Tinkoff-Saxo) အသင်းမှ Peter Sagan ကုို နှာတဖျားအသာနဲ့ အခုလုို အနုိုင်ရသွားတာဖြစ်ပါတယ်။
ပထမ မရတာကြာပြီဖြစ်လုို့ ဖိအားအတော်ခံနေရတဲ့ စလုိုဗက်ကီးယားနုိုင်ငံသား Peter Sagan ဟာ ဒီနေ့ပွဲမှာလည်း ဒုတိယနဲ့ပဲ ကျေနပ်လုိုက်ရပါတယ်။ တတိယ အဖြစ်ကတော့ Drapac Professional Cycling အသင်း မှ Wouter Wippert (Ned) က ရရှိသွားပါတယ်။
Nevada City ကနေ Lodi အထိ 193.1ကီလုိုမီတာပြိုင်ပွဲအတွင်း breakaway အုပ်စုအဖြစ် Daniel Oss (BMC Racing) Markel Irizar (Trek Factory Racing) and Luis Amaran (Jamis-Hagens Berman) အပါဝင် ၄ ဦးအဖွဲ့က ပန်းဝင်ခါနီး ၅ ကီလုိုအထိ ၃ မီနစ်ခန့် ဖြတ် ထားနုိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ပန်းဝင်ဖုို့ ၁၀ ကီလုိုမီတာဝန်းကျင်မှာ ပြင်းထန်တဲ့ပြိုလဲမှုတခုဖြစ်ခဲ့ပြီး စက်ဘီးသမားတချို့ ပြိုင်ပွဲကနေ ထွက်သွားရပါတယ်။
ဒုတိယနေ့အပြီး ၁-၁၀ ဦးကတော့...
10 Danny van Poppel (Ned) Trek Factory Racing တုို့ဖြစ်ပါတယ်။
Tour of California 2015 တတိယနေ့ Toms Skujins အနုိုင်ရ။
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၊ ကာလီဖုိုးနီးယားပြည်နယ်မှာ ၈ ရက်ကြာ ကျင်းပနေတဲ့ Tour of California 2015 တတိယ နေ့မှာ အသက် ၂၃ နှစ်သာ ရှိသေးတဲ့ လူငယ်လေး Toms Skujins က ပထမ ရသွားပါတယ်။
San Jose ကနေ San Jose မြို့တပတ် 168.9 km ကီလုိုမီတာပြိုင်ပွဲရဲ့ နောက်ဆုံး ကီလုို ၅၀ ကျော်ကုို Hincapie Racing Team အသင်းမှ Toms Skujins (Lat) က တကိုယ်တော် စီးပြီး အခုလုို အနုိုင်ရသွားတာပါ။
သူ့နောက်မှာ တမီနစ်ကျော်နောက်ကျပြီးမှ အုပ်စုအလုိုက် ပန်းဝင်လာသူတွေ ထဲမှာတော့ Peter Sagan (Svk) Tinkoff-Saxo က ဒုတိယ၊ Julian Alaphilippe (Fra) Etixx - Quick-Step တုို့က တတိယ ရပါတယ်။ မနေ့က အထိ အ၀ါရောင်အကျီရထားသူ (Etixx-Quick Step) အသင်းမှ Mark Cavendish ကတော့ ဒီနေ့မှာ အ၀ါရောင်ကုိုစွန့်လုိုက်ရပါတယ်။
ထူးခြားတာကတော့ ဒုတိယ ချည်း ၃ ရက်ဆက်တုိုက်ရနေသူ Peter Sagan (Svk) Tinkoff-Saxo ပါပဲ။ သူဟာ ဒီနှစ်အတွက် Tinkoff-Saxo အသင်းကို ပြောင်းပြီးကတည်းက ဥရောပပွဲတခုမှာ ပထမ တကြိမ်သာရသေးပြီး အောင်ပွဲ နဲ့ဝေးလုို့ ဝေဖန်ခံနေရသူဖြစ်ပါတယ်။
သူရဲ့အဓိကအောင်ပွဲဟာ ကာလီဖုန်းနီးယားဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီပွဲမှာ သူ ပထမ ရမယ်ဆုိုပြီး အများကမျှော်လင့်နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကံဆုိုးချင်တော့ အခုချိန် ထိ ပထမ မရသေးဘဲ ဒုတိယ ချည်း ၃ ရက်ဆက်တုိုက်ရနေပါတယ်။
ဒီနေ့မှာတော့ Pismo Beach ကနေ Avila Beach အထိ 172.2 km ကီလုို မီတာကို စတုတ္တနေ့အဖြစ် ဆက်လက်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ရှိနေပါတယ်။
၃ ရက်တာပြိုင်ပွဲပြီးချိန် ၁-၁၀ ရထားသူ ၁၀ ဦးစာရင်းကတော့...
10 Jay McCarthy (Aus) Tinkoff-Saxo တို့ဖြစ်ပါတယ်။
Tour of California မှာ Peter Sagan တကယ်နုိုင်ပြီ။
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၊ ကာလီဖုိုးနီးယားပြည်နယ်မှာ ၈ ရက်ကြာ ကျင်းပနေတဲ့ Tour of California 2015 စတုတ္တနေ့မှာ Peter Sagan (Svk) Tinkoff-Saxo ပထမ ရသွားပါတယ်။
သူဟာ ၃ ရက်ဆက်တုိုက် ဒုတိယ ရပြီးတဲ့နောက် ဒီနေ့မှာတော့ Sprint အား ကောင်းစွာနဲ့ ဒုတိယလူကို စက်ဘီး တစီးစာအသာ အနုိုင်ရသွားတာပါ။ ထုံးစံ အတုိုင်း ပထမ ရတဲ့အချိန်မှာ စက်ဘီးကိုထောင်ပြီး စီးပြသွားပါသေးတယ်။ ဒီလုိုဆုရသွားတဲ့အတွက် သူအပေါ်အချိန်လုံး ရှိနေတဲ့ Tinkoff-Saxo အသင်းပုိုင်ရှင် Oleg Tinkoff ရဲ့ ဖိအားတွေလည်း တစုံတရာလျော့ သွားမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။
သူနောက်မှာတော့ Wouter Wippert (Ned) Drapac Professional Cycling နဲ့ လက်ရှိ အစိမ်းရောင်ပုိုင်ရှင် Mark Cavendish (GBr) Etixx - Quick-Step တုို့ပန်းဝင်ပါတယ်။ ၄ ရက်ပေါင်း ပထမနေရာ သုို့မဟုတ် အ၀ါရောင်အကျီကိုတော့ Toms Skujins (Hincapie) က ထိမ်းထားဆဲဖြစ်ပြီး Peter Sagan က ၂၂ စက္ကန့်အကွာနဲ့ ဒုတိယနေရာမှာရှိနေပါတယ်။
Pismo Beach ကနေ Avila Beach အထိ 172.2 km ကီလုိုမီတာပြိုင်ပွဲအတွင်း ကီလုို ၂၀ ကျော်ကတည်းက Breakaway အုပ်စုအဖြစ် Gregory Daniel (Axeon Cycling), Kiel Reijnen (UnitedHealthcare), William Clarke (Drapac) and Jesse Anthony (Optum-Kelly Benefit ၄ ဦးအုပ်စုက 3:40 မီနစ်အထိ ဖြတ်ထားနုိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ပန်းဝင်ဖုို့ ကီလုို ၃၀ ၀န်းကျင်အလုိုမှာတော့ သူတို့အုပ်စုရဲ့အရှိန်တဖြေးဖြေးကျလာပြီး ၁၇ ကီလိုအလုိုမှာ ၃၀ စက္ကန့်ပဲ ကွာပါတော့တယ်။ ဒီလိုနဲ့နောက်ဆုံး ပန်းဝင်ခါနီးမှာမှ အားလုံး Sprint တင်ကြပြီး ပီတာဆာဂင်က အခုလို အနုိုင်ရသွားတာပါ။
ဒီနေ့မှာတော့ ၅ ရက်မြောက်ပြိုင်ပွဲအဖြစ် Santa Barbara ကနေ Santa Clarita အထိ 157.7 km ကီလုိုမီတာကို ယှဉ်ပြိုင်စီးနင်းဖုို့ရှိနေပါတယ်။ ။
၄ ရက်မြောက်နေ့အထိ ၁-၁၀ ရထားသူ ၁၀ ဦးကတော့...
10 Jay McCarthy (Aus) Tinkoff-Saxo တုို့ဖြစ်ပါတယ်။
Tour of California ၅ ရက်မြောက်မှာ Mark Cavendish ပြန်နုိုင်ပြန်ပြီ။
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၊ ကာလီဖုိုးနီးယားပြည်နယ်မှာ ၈ ရက်ကြာ ကျင်းပ နေတဲ့ Tour of California 2015 စက်ဘီးပြိုင်ပွဲ ၅ ရက်မြောက်နေ့မှာ Mark Cavendish (GBr) Etixx - Quick-Step ပထမ ပြန်ရသွားပါတယ်။ ဒါဟာ ၅ ရက်အတွင်း ၃ ကြိမ်မြောက် အနုိုင်ရခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။
သူ့နောက်မှာတော့ Zico Waeytens (Bel) Team Giant-Alpecin က ဒုတိယ နဲ့ မနေ့က ပထမရသူ Peter Sagan (Svk) Tinkoff-Saxo က ဒီနေ့ တတိယ ပြန်ဖြစ်သွားပါတယ်။ သူဟာ ၃ ရက် ဒုတိယ၊ တရက် ပထမနဲ့ ဒီနေ့မှာ တတိယ ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။
Santa Barbara ကနေ Santa Clarita အထိ 154km ကီလုိုမီတာ ပြိုင်ပွဲ တလျောက်လုံးနီးပါး မုိုးတွေရွာနေလို့ လမ်းချော်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲအစ ပုိုင်းကနေ ပန်းဝင်ဖုို့ ၅ ၃ ကီလုိုလောက်အထိ Breakaway ၅ ဦးအုပ်စုတခု (Danilo Wyss (BMC Racing), Alex Howes (Cannondale-Garmin), Javier Megias Leal (Novo Nordisk), Lachlan Morton (Jelly Belly-Maxxis) and Geoffrey Curran (Axeon Cycling) က ဦးဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
မုိုးရွာပြီးမှောင်မဲနေတဲ့အတွက် EuroSport TV ကပုံတွေ သိပ်မကြည်လင်လှ ပါ။ ပန်းဝင်ဖို့ ၄ ကီလုိုခွဲအလုိုမှာတော့ မုိုးရေထဲ ဘီးချော်ပြိုလဲမှုတခုဖြစ်ခဲ့ပြီး စက်ဘီးသမား တဒါဇင်ခန့် လဲပြိုသွားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဦးဆောင်အဖွဲ့တွေ ဖြစ်တဲ့ အခု ပ-ဒု-တ ရသူအုပ်ကတော့ လွတ်သွားခဲ့ပါတယ်။
၅ ရက်တာပွဲအပြီးမှာတော့ Skujins က ပထမ အဖြစ် အကျီအ၀ါကုို ဆက် ထိမ်းထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။ Peter Sagan (Svk) Tinkoff-Saxo ကလည်း ၂၂ စက္ကန့် အကွာနဲ့ ဒုတိယ နေရာမှာရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
မနက်ဖြန်မှာတော့ Big Bear Lake (ITT) မှာ 24.1 km ကီလုိုမီတာ တဦးချင်းစံချိန်ပြု time trial ပြိုင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Tour of California ၆ ရက်မြောက်မှာ Peter Sagan ပြန်နုိုင်။
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၊ ကာလီဖုိုးနီးယားပြည်နယ်မှာ ၈ ရက်ကြာ ကျင်းပ နေတဲ့ Tour of California 2015 စက်ဘီးပြိုင်ပွဲ ၆ ရက်မြောက်နေ့ တဦးချင်း စံချိန်ပြု time trial ပြိုင်ပွဲမှာ Peter Sagan (Tinkoff Saxo) က အခုလုို အနုိုင် ရသွားတာပါ။
၁၀.၆ ကီလုိုမီတာ တဦးချင်းစံချိန်ပြုမှာ Peter Sagan (Svk) Tinkoff-Saxo က 22:15:24 မီနစ်နဲ့ ပထမ၊ Julian Alaphilippe (Fra) Etixx - Quick-Step က 0:00:44 နဲ့ ဒုတိယ၊ Joey Rosskopf (USA) BMC Racing Team 0:00:48 နဲ့ တတိယ ရသွားပါတယ်။
Peter Sagan ဟာ ဒီပွဲမှာ စံချိန်ကောင်းကောင်းနဲ့ နုိုင်သွားတဲ့အတွက် ၆ ရက် စလုံးအတွက် အ၀ါရောင်အကျီပုိုင်ရှင် Toms Skujins (Lat) Hincapie Racing Team ကုို 0:00:28 ဖြတ်လုိုက်နုိုင်တာကြောင့် အ၀ါရောင် အကျီကုို ပါ ရရှိသွားပါတယ်။
၆ ရက်နေ့အပြီး ၁-၁၀ ဦးကတော့...
မနေ့ကမုိုးရွာပြီး စက်ဘီးသမားတချို့လဲပြိုမှုရှိခဲ့ပေမယ့် ဒီနေ့မှာတော့ ရာသီဥတု က သာသာယာယာပါပဲ။
မနက်ဖြန်မှာတော့ Ontario ကနေ Mt. Baldy အထိ 128.7 km ကီလုိုမီတာ ကိုယှဉ်ပြိုင်ဖို့ရှိနေပါတယ်။
Tour of California ၇ ရက်မြောက်ပွဲ Julian Alaphilippe အနုိုင်ပြန်ရ။
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၊ ကာလီဖုိုးနီးယားပြည်နယ်မှာ ၈ ရက်ကြာ ကျင်းပ နေတဲ့ Tour of California 2015 စက်ဘီးပြိုင်ပွဲ ၇ ရက်မြောက်နေ့ တောင် တက်ပြိုင်ပွဲမှာ Julian Alaphilippe (Fra) Etixx - Quick-Step က 3:42:13 နဲ့ ပထမ ရသွားပါတယ်။
သူ့နောက်မှာတော့ Sergio Luis Henao Montoya (Col) Team Sky 0:00:23 နဲ့ Ian Boswell (USA) Team Sky တို့က ဒုတိယနဲ့ တတိယ ရကြ ပါတယ်။
ကံဆုိုးတာကတော့ အ၀ါရောင်အကျီပုိုင်ရှင် Peter Sagan (Tinkoff Saxo) ပါပဲ။ ပန်းဝင်ဖုို့ ၅ ကီလုိုမီတာအထိ အုပ်စုနဲ့အတူ ပုံမှန်လုိုက်လာနုိုင်ခဲ့ပြီးမှ ပန်း အ၀င်မှာ Julian Alaphilippe ကုို ၂ စက္ကန့်နောက်ကျသွားတဲ့အတွက် အ၀ါ ရောင်အကျီကို စွန့်လုိုက်ရပါတယ်။ Julian Alaphilippeကုို မနေ့က စံချိန်ပြု ပွဲမှာ ၄၅ စက္ကန့်ဖြတ်ထားနုိုင်ခဲ့ပြီး ဒီနေ့ပွဲမှာ ပီတာက ၄၇ စက္ကန့်နောက်ကျပြိး မှပန်းဝင်နုိုင်တဲ့အတွက် အခုလုို ၂ စက္ကန့်နောက်ကျသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ မနက် ဖြန် နောက်ဆုံးနေ့ပွဲမှာ ဒီ ၂ စက္ကန့်ကို ပြန်ဖြည့်နုိုင်မလားဆုိုတာကိုတော့ စိတ် ၀င်တစားစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Ontario ကနေ Mt. Baldy အထိ 128.7 km ကီလုိုမီတာပြိုင်ပွဲဟာ တောင် တက်သက်သက်ဖြစ်ပြီး Sprinter မာ့ ကာဗင်းဒစ်ဆုိုရင် အစောပုိုင်းကတည်း က ပြတ်ကျန်ခဲ့ပါတယ်။ Breakaway အုပ်စုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့ ပန်းဝင်ဖုို့ ကီလုို ၂၀ ၀န်းကျင်မှာ အားလုံးကုို အုပ်စုကြီးက ပြန်ဖမ်းမိသွားပါတယ်။
ဒီလုိုနဲ့ နောက်ဆုံးတောင် Mt. Baldy မှာ ပန်းဝင်ဖုို့ ၄ ကီလုိုအလုိုကျမှ Julian Alaphilippe (Fra) Etixx - Quick စဖေါက်ပြေးပါတယ်။ ကျန်တဲ့လူတွေ ချက် ချင်းမလုိုက်တဲ့အတွက် တဖြေးဖြေးတင်ပြေးရာကနေ ပန်းဝင်တဲ့အထိ ဒုတိယ လူကုို ၂၃ စက္ကန့်ဖြတ်သွားနုိုင်ခဲ့တာပါ။ ပီတာဆာဂင်ကတော့ ၄၆ စက္ကန့် နောက်ကျပြီး နံပတ် ၆ နေရာကနေ ပန်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။
အရင်နှစ်တွေက အစိမ်းရောင်အကျီကိုသာ စိတ်ဝင်စားတဲ့ ပီတာဆာဂင်ဟာ ဒီနှစ်မှာတော့ အ၀ါရောင်အကျီရဖုို့အထိ ကြိုးစားလာတာဖြစ်ပါတယ်။
အခု ၇ ရက်မြောက် ပွဲအပြီးအထိ ၁-၁၀ ရထားသူတွေကတော့..
10 Rob Britton (Can) Team SmartStop 0:02:06 တုို့ဖြစ်ပါတယ်။
မနက်ဖြန်မှာတော့ Los Angeles ကနေ Pasadena 96.5 km ကီလုိုမီတာ ကိုစီးနင်းကြမှာဖြစ်ပြိး ပီတာဆာဂင် အ၀ါရောင်ပြန်ရ မရ သို့မဟုတ် Julian Alaphilippe (Fra) ကုို Peter Sagan (Svk) ၃ စက္ကန့်လောက်ပြတ်အောင် စီးနုိုင် မနုိုင်ကုို စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ။
Tour of California မှာ Peter Sagan အ၀ါရောင်အကျီရ။
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၊ ကာလီဖုိုးနီးယားပြည်နယ်မှာ ၈ ရက်ကြာ ကျင်းပ နေတဲ့ Tour of California 2015 စက်ဘီးပြိုင်ပွဲ နောက်ဆုံးနေ့ပွဲစဉ်မှာ နာ မည်ကြီး Sprinter Mark Cavendish က ပထမ ရသွားပါတယ်။
ပန်းဝင်ခါနီး အကြိတ်အနယ် Sprint တင်ရာမှာ Mark Cavendish (GBr) Etixx - Quick-Step က 2:14:55 နဲ့ ပထမ၊ Wouter Wippert (Ned) Drapac 0:00:00 က ဒုတိယနဲ့ Peter Sagan (Svk) Tinkoff-Saxo 0:00:00 က တတိယရပါတယ်။
၈ ရက်ပေါင်းရမှတ်မှာတော့ Peter Sagan က မနေ့က ပထမ ရထားသူ Julian Alaphilippe (Fra) Etixx - Quick-Step ကုို ၃ စက္ကန့်ဖြတ်ပြီး ပထမ သုို့မဟုတ် အ၀ါရောင်အကျီရ သွားပါတယ်။ မနေ့ကပွဲအပြီးမှာ Julian Alaphilippe ရဲ့နောက်ကုို ပီတာက ၂ စက္ကန့်ပြတ် နေရာကနေ ဒီနေ့မှာတော့ မြို့ပတ်ပြိုင်ပွဲ ပထမ အပတ်မှာ ဒုတိယ ရတဲ့အတွက် တစက္ကန့် အပိုဆောင်းဆု time bonus ရပါတယ်။
တခါ နောက်ဆုံးပတ်ပန်းဝင်ချိန်မှာ သူ့ကုို တတိယ မရအောင် Etixx - Quick-Step အသင်း က ကြိုးစား ပိတ်ဆုိုခဲ့ပေမယ့် ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ Tyler Farrar (USA) MTN - Qhubeka ကုို ဆံချည်တမျင်စာ အသာရပြီး တတိယ ရသွားပါတယ်။ ဒါကြောင့် နောက်ထပ် စက္ကန့်တချို့အပုိုဆုထပ်ရပြီး အ၀ါရောင်အကျီရသွားတာဖြစ်ပါတယ်။
Etixx - Quick-Step အသင်းကတော့ ဒီနေ့အတွက် Mark Cavendish ပထမရပေမဲ့ အားလုံးပေါင်း ပထမရသင့်သူ ပြင်သစ်လူငယ်လေး Julian Alaphilippe (Fra) Etixx - Quick-Step မရ တော့တဲ့အတွက် အသင်းအတွက် ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ အကဲခတ်တွေက ဆုိုပါတယ်။
ပန်းဝင်ပြီး အ၀ါရောင်အကျီရပြီဆုိုတာ သေချာတာနဲ့ Peter Sagan ဟာ သူ့စတုိုင်အတုိုင်း စက်ဘီးကို ထောင်ပြီးစီးပြသွားပါတယ်။ အရင် အစိမ်းရောင် အကျီရနေရာကနေ အခုတော့ အ၀ါရောင်အကျီကိုပါ ပုိုင်သွားတဲ့အတွက် Tinkoff-Saxo အသင်းပုိုင်ရှင်ရဲ့ သူ့အပေါ်ထားရှိတဲ့ ဖိအားတွေ အုိုကေ သွားလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။
၈ ရက်တာပွဲ အကောင်းဆုံးအမှတ်ရှင် ၁၀ ဦးကတော့...
10 Rob Britton (Can) Team SmartStop 0:02:10 ဖြစ်ပါတယ်။ ။